Wakiilka QM ee Somalia oo ka dalbaday guddiga doorashada Jubbaland in ay fuliyaan… – Hagaag.com
Wakiilka QM ee Somalia oo ka dalbaday guddiga doorashada Jubbaland in ay fuliyaan…
Warqad uu u direy guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland, Xamza Cabdi Barre ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ayaa ugu horeyntii loogaga mahadceliyay guddiga go’aanka ay saddex maalmood dib ugu dhigaan doorashada madaxweynaha.
James Swan ayaa warqaddiisa ugu sheegay Xamza in isbeddelada guddigiisa ay sameeyeen aysan weli buuxin tallaabooyinkii beesha caalamka ay codsatay in la qaado, si loogu kalsoonaado hannaanka doorashada Jubaland.
“Warqaddeeni 8-da August, ee aan kuu soo diray aniga oo wakiil ka ah saaxiibada Soomaaliya ee caalamka, waxaan ku adkeynay muhiimadda hanaan doorashada oo cad, la isku raacsan yahay, la isku haleyn karo , islamarkaana heli kara taageerada dadka Jubbaland oo dhan, horseedi karana midnimada bulshada Jubbaland.” ayuu ku qoray James Swan qoraalkii uu u direy guddoomiyaha doorashada Jubbaland Xamza.
Wakiilka QM ayaa ku xusay qoraalkiisa in haddii aan la qaadan tallaabooyinka ay codsatay beesha caalamka aysan taageeri doonin natiijada hanaanka doorashada Jubbaland.
“Guddiga doorashada haddii uusan wax ka qaban walaacyada muhiimka ah ee ay qabaan dhinacyada ay khuseyso arrintan, waxaa jirta halis ah in natiijada hanaanka doorashada uusan heli doonin taageerada buuxda ee lagama maarmaanka u ah in la joogteeyo xasiloonida iyo nabbadda Jubaland” ayuu sii raaciyay James Swan.
Hase yeeshee qoraalkan loo direy guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland ayaan lagu xusin mowqifka ay beesha caalamka ka qabaan doorashooyinkii iska soo horjeeday ee maanta lagu doortay labo guddoomiye baarlamaan oo maamulka Jubbaland ah.